कोरना भाइरसबाट बचाउँन अचानक नेपाल टेलिकमले गरिदियो यस्तो परिबर्तन ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/कोरना भाइरसबाट बचाउँन अचानक नेपाल टेलिकमले गरिदियो यस्तो परिबर्तन !
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसवाट बच्ने उपायका बारेमा ब्यक्तिगत र सामाजिक सस्थावाट सचेतना अभियान सुरु भएको छ । नेपालमा कोरोना आइनसकेको भएपनि रोकथामका लागि सरकार र गैरसरकारी तवरवाट अभियान सुरु भएको हो । सरकारले कोरोना भित्रन नदिन कठोर नियम लागू गरेको छ । सरकारलाई सहयोग गर्न ब्यक्तिगत र सामाजिक तवरवाट पनि अभियान सुरु भएका छन् ।
नेपाल टेलिकमले पनि कोरोना रोकथामको अभियानमा सहयोग पुर््याउन जानकारी दिने ब्यवस्था मिलाएको छ । नेपाल टेलिकमले ३२१०० नम्बर डायल गर्दा कोरोनाका बारेमा जान्नुपर्ने जानकारी सुन्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । टेलिकमले ‘एनटी सूचनाको संसार’ सेवामार्फत कोभिड–१९ बारे जानकारीमूलक सामग्री आफ्‍नो मोबाइलमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । मोवाइलमा ३२१०० नम्बर डायल गर्दा टेलिकमले राखेको जानकारी निःशुल्क सुन्‍न सकिन्छ ।
उक्त नम्बरमा कल गरे पश्चात् कोरोना लाग्दा हुने लक्षणहरु, फैलने तरिका, उपचार विधि पनि सुन्न सकिन्छ । साथै कोरोनावाट बच्‍न अपनाउनु पर्ने उपायहरु र अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा जानकारी मुलक सामग्री राखेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेका सूचकहरुका बारेमा नेपाल टेलिकमले जानकारी राखेको टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।३२१०० नम्बर डायल गरेपछि यस सम्बन्धि थप जानकारी लिनका लागि सरकारका हटलाइन नम्बरहरु समेत थाहा पाउन सकिने टेलिकमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तै नेपाल टेलिकम नेटवर्कभित्र फोन गर्दा कलर रिंग ब्याक टोन (सीआरबीटी) मार्फत कोरोना भाइरसबारे सूचना प्रवाह गरेको छ। कोरोना भाइरस फैलन नदिन सतर्कता अपनाउन ब्यक्तिगत तवरवाट पनि सरकारलाई सहयोग गर्नेहरु बढेका छन् । होटल ब्यवसायीहरुले होटललाई आइसोलेसनका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिएका छन् भने काठमाडौंका केही घरधनीहरुले पनि आफ्नो घर उपलब्ध गराएका छन् ।
बिवाहपछि काजलले श्रीमानलाई लेखिन् यस्तो मन छुने दुई लाइन
वडाध्यक्षको घर र खाजा पसलबाट बरामद ठूलो परिमाणको ला’गू औषध नष्ट
अनियन्त्रित भई कार रुखमा ठोकिँदा दुई जनाको मृत्यु